Joba 12 - Baiboly Masina [Malagasy Bible 1865] - (Joba 12)
[Ny teny navalin'i Joba] Dia namaly Joba ka nanao hoe:
Marina ary fa ianareo ihany tokoa olombelona! Ary hiara-maty aminareo ny fahendrena!
Kanefa izaho mba manan-tsaina tahaka anareo ihany koa; Tsy latsaka noho ianareo aho; Fa iza moa no tsy nahalala izay zavatra toy izany?
Tonga fihomehezan'ny sakaizako aho. Dia izaho izay niantso an'Andriamanitra ka novaliany; Eny, tonga fihomehezana ny olona marina tsy manan-tsiny.
Endrehin-datsa ny ozoim-pahoriana, raha araka ny hevitry ny miadana, eny, vonona ho amin'izay ela mangozohozo ny latsa.[Na: Fanilo milopilony ny ozoim-pahoriana, raha araka ny hevitry ny miadana, ka tandrifiny ho an'izay efa ho tafintohina ihany]
Mandry fahizay ny lain'ny mpitohatoha, Ary mitoetra tsy manahy izay sahy mampahatezitra an'Andriamanitra, dia izay mitondra ny herin'ny tànany ho andriamaniny
Kanefa anontanio ange ny biby, fa hampianatra anao izy, ary ny voro-manidina, fa hanambara aminao izy;
Ary makà saina amin'ny tany, dia hampianatra anao izy. Ary ny hazandrano any an-dranomasina hampahalala anao.[Na: amin'ny hazo madinika]
Iza no tsy mahalala, raha mandinika ireny rehetra ireny, fa ny nanao izany dia ny tanan'i Jehovah,[Na: Iza amin'ireny rehetra ireny no tsy mahalala]
Izay mitana ny ain'ny zava-manan'aina rehetra sy ny fofonain'ny olombelona rehetra?
Moa tsy ny sofina va no mamantatra ny teny? Ary tsy ny vava va no manandrana ny hanina?
Ao amin'ny fotsy volo ny fahendrena, ary ny fahela-velona no ahazoam-pahalalana.
Ao amin'Andriamanitra kosa no misy fahendrena sy hery; Izy no manana hevitra sy fahalalana.
Indro, mandrava Izy, ka tsy hatsangana intsony; Manidy ny olona Izy, ka tsy hovohana.
Indro, manampina ny rano Izy, ka dia ritra iny; Ary alefany indray ka mahasimba ny tany.
Izy no manana hery sy tena fahendrena; Samy eo an-tanany avokoa ny voafitaka sy ny mpamitaka.
Alany voninahitra ny mpanolo-tsaina, dia entiny. Ary asehony ny fahadalan'ny mpitsara.
Vahany ny fifehezan'ny mpanjaka, ka feheziny mahazaka ny valahany.
Alàny voninahitra ny mpisorona, dia entiny, ary ny mafy orina ela dia ravany.
Koroiny ny laha-tenin'ny mahay, ary ny fahazavan-tsain'ny anti-panahy dia esoriny.
Mandatsaka fanamavoana amin'ny andriandahy Izy, ary ketrahiny ny fehin-kibon'ny matanjaka.
Manala rakotra izay lalina Izy mba tsy ho maizina ary mitondra ny aloky ny fahafatesana ho eo amin'ny mazava.
Mahalehibe ny firenena Izy, nefa mandringana azy koa, mampihahaka ny firenena Izy, nefa mitondra azy hody indray.
Mahavery saina ny loholona amin'ny tany Izy ary mampirenireny azy any an-efitra tsy misy lalana;Mitsapatsapa amin'ny maizina tsy misy mavaza ireo; ary mampivembena azy tahaka ny olona mamo Izy.
Mitsapatsapa amin'ny maizina tsy misy mavaza ireo; ary mampivembena azy tahaka ny olona mamo Izy.
Joba 1 / Joba 1
Joba 2 / Joba 2
Joba 3 / Joba 3
Joba 4 / Joba 4
Joba 5 / Joba 5
Joba 6 / Joba 6
Joba 7 / Joba 7
Joba 8 / Joba 8
Joba 9 / Joba 9
Joba 10 / Joba 10
Joba 11 / Joba 11
Joba 12 / Joba 12
Joba 13 / Joba 13
Joba 14 / Joba 14
Joba 15 / Joba 15
Joba 16 / Joba 16
Joba 17 / Joba 17
Joba 18 / Joba 18
Joba 19 / Joba 19
Joba 20 / Joba 20
Joba 21 / Joba 21
Joba 22 / Joba 22
Joba 23 / Joba 23
Joba 24 / Joba 24
Joba 25 / Joba 25
Joba 26 / Joba 26
Joba 27 / Joba 27
Joba 28 / Joba 28
Joba 29 / Joba 29
Joba 30 / Joba 30
Joba 31 / Joba 31
Joba 32 / Joba 32
Joba 33 / Joba 33
Joba 34 / Joba 34
Joba 35 / Joba 35
Joba 36 / Joba 36
Joba 37 / Joba 37
Joba 38 / Joba 38
Joba 39 / Joba 39
Joba 40 / Joba 40
Joba 41 / Joba 41
Joba 42 / Joba 42